The MYAWADY Daily: February 2016
လက်ဗွေထက်ပိုသော ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိ သက်သေခံအမှတ်အသားများ
ဒီကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ လူပေါင်း ခုနစ် ဘီလီယံထက် မနည်း ရှင်သန်နေ ထိုင်နေပါတယ်။ တစ်ဘီလီယံ ဆိုတာ သန်းပေါင်း ၁ဝဝဝ နဲ့ ညီမျှပါတယ်။ ဒီတော့ ကမ္ဘာ့ လူဦးရေဟာ သန်း ပေါင်း ၇ဝဝဝ ပေါ့။ ဒီလူပေါင်း သန်းပေါင်း ၇ဝဝဝ ဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူကြပါဘူး။ အဲဒီမှာ သိပ္ပံပညာရှင် တွေရဲ့ စကားတစ်ခွန်း ကို သွားသတိရပါတယ်။ ဒီလောက ကြီးမှာ ဘယ်အရာမှ တိတိကျကျ မတူပါဘူး၊ ဆင်တူတာပဲ ရှိတယ်တဲ့။ ဟုတ်လောက် ပါတယ်။
လက်ဗွေ။ တစ်ချိန်က လက်ဗွေရာဆိုရင် FBI ကိုပဲ ပြေးသတိရ တတ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ဟာ အခုဆို ရင် ဖုန်းအတော် များများမှာ လက်ဗွေ နဲ့ Pnone Screen Lock ကို ဖွင့်တဲ့နည်း စနစ် ပါလာတာကို မြင်တွေ့ နေရပါပြီ။ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် လက်ဗွေချင်း ဘယ်တော့မှ မတူပါဘူး။ ဒီတော့ Biometric Security System လို့ခေါ်တဲ့ ဇီဝအမှတ်အသား အသုံးပြု လုံခြုံရေး စနစ်တွေမှာ ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဆိုတာကို လက်ဗွေနဲ့ ခွဲခြားတဲ့ စနစ်ဟာ အလွန်ပဲ တွင်ကျယ် ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတွေမှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူပဲကွဲပြားတာ လက်ဗွေ တစ်မျိုးတည်း မဟုတ်ပါဘူး။
မျက်ဝန်း။ မျက်ဝန်းသည် နှလုံးသား၏ ပြတင်းပေါက် ဖြစ်သည် ဆိုသကဲ့သို့ သင့် သက်သေခံ အမှတ်အသား တစ်ခုလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်ဝန်းဟာ မျက်စိ သူငယ်အိမ်ကို အဖွင့်အပိတ် လုပ်ပေးတဲ့ ကြွက်သားဖြစ်ပြီး သူငယ်အိမ်ထဲ အလင်းဝင်တဲ့ ပမာဏကို ထိန်းချုပ်ပေး ပါတယ်။ မျက်ဝန်းမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ ချိုင့်လေးတွေ၊ အရေးအကြောင်းလေးတွေ၊ အကွေ့အကောက်လေးတွေ၊ အကွဲကြောင်းလေးတွေဟာ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မှာ လုံးဝမတူပါဘူး။ ဒီတော့ သင့်မျက်လုံးကို အဖွင့်၊အပိတ် လုပ်တိုင်း အသုံးပြုနေတဲ့ သင့်မျက်ဝန်းဟာ ဘယ်သူမှ တုပလို့ မရနိုင်တဲ့ သင့် သက်သေခံ အမှတ်အသား ဖြစ်ပါတယ်။
နားရွက်။ သင့်နားရွက် နှုတ်ခမ်းသား တွေကို လက်ညိုးလေး နဲ့ အသာ လိုက်ပွတ်ကြည့်ပါ။ အဲဒီပုံစံမျိုးနဲ့ နားရွက်က သင်တစ်ဦးတည်း ဆီမှာပဲ ရှိတာပါ။ ဒါကြောင့်လဲ ဖုန်း၊ တက်ဘလက် အစ ရှိတာတွေမှာ မျက်နှာပုံဖမ်း စနစ်နဲ့ Lock Screen ဖြည်လို့ရတဲ့ စနစ် Face Detector ပါဝင်ပြီး သင့်နားရွက် တွေကနေ ရောင်ပြန်တဲ့ အလင်းကို ဖမ်းပြီးတော့ သင်ဟုတ်၊ မဟုတ် ဆုံးဖြတ် နိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု နောက်ပိုင်းမှာ ကင်မရာကို တောင်မသုံးတော့ ပါဘူး။ လက်ဗွေနှိပ်ပြီး ဖုန်းစကရင် ဖွင့်လို့ ရသလို ဖုန်းစကရင်ပေါ် နားရွက်ကို အသာ ကပ်လိုက်ရုံ နဲ့လဲ ပြီးပါတယ်။
နှုတ်ခမ်း ။ကိုလဲ ဖတ်လို့ရပါတယ်။ လျှို့ဝှက် စုံထောက်ကျော် တွေဟာ သက်သေ အထောက်အထား တွေကို စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုဖို့ အခြားနည်းလမ်း မရှိရင် ပလတ်စတစ် အိတ်ကို တရှိုက်မက်မက် နမ်းလိုက်လေ့ ရှိပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းရာ အထင်းသား ပေါ်သွားပြီး ခဏအကြာမှာ သာမန်မျက်လုံးနဲ့ မမြင်နိုင်တော့လို့ ပျက်သွားပြီလို့ ထင်ရပေမယ့် ဗွေရာဖတ်တဲ့ ပေါင်ဒါမှုန့်လေး ဖြူးပေးလိုက်ရုံနဲ့ နှုတ်ခမ်းပုံ ပြန်ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်ဝန်း၊ နားရွက်တွေလိုပဲ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နှုတ်ခမ်းပုံစံ၊ အကွဲကြောင်းတွေ၊ အမြောင်းလေးတွေ၊ ဖောင်းကြွပုံတွေ လုံးဝမတူပါဘူး။
လျှာ ။ နောက်ဆိုရင် လျှာကို ဖတ်ပေးမယ့် 3D စက်တွေ ထွက်လာ ပါတော့မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လျှာပုံစံ၊ အထူအပါး၊ အရသာခံအဖု၊ လျှာစောင်း၊ အစရှိတာတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူပါဘူး။ ဒါ့ပြင် အရွယ်ရောက် တာနဲ့အမျှ ပွန်းတာ၊ ပဲ့တာတွေဖြစ်လို့ဝေဝါးသွား တတ်တဲ့ လက်ဗွေရာ ထက်လဲ အများကြီး ပိုပြီး စိတ်ချရတဲ့ သက်သေခံ အမှတ်အသား ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆို ဖုန်းလာရင် လျှာထုတ်ပြ ရပါလိမ့်မယ်။
အသံ ။ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အသံလဲ တစ်ပုံစံတည်း ဘယ်တော့မှ မတူပါဘူး။ အသံတု ဝိဇ္ဇာများ ဘယ်လောက်ပဲ ကျွမ်းကျင်သည် ဖြစ်စေပါ။ သင့်နားထဲမှာ အသံတွေတူ နေနိုင်ပေမယ့် ခေတ်မီ စက်ကိရိယာ တွေနဲ့ဖမ်းယူ စိစစ်ကြည့် လိုက်မယ်ဆိုရင် အသံရဲ့တုန်ခါမှု၊ အတိုးအကျယ်၊ အပျော့အမာဟာ မတူနိုင်ပါဘူး။ အသံဟာ ကျစ်ခြင်း၊ ပဲ့တင်သံပါခြင်း၊ နှာသံပါခြင်း အစရှိတာတွေမှာ အများကြီး ကွာခြားသွား ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ လည်ပင်း အရှည်၊ အသံပြွန်အရွယ်အစား၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ၊ သွားအနေအထား အားလုံးတို့အပေါ် မူတည်ပြောင်းလဲတာမို့အသံဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တစ်ပုံစံတည်း မတူနိုင်ပါဘူး။ ဖုန်းတွေမှာ အခုတောင် Voice Detector ကို သုံးနေကြပါပြီ။
ခြေချောင်းဗွေ။ သန္ဓေသား အရွယ် ၁ဝ ပတ်ကနေ ၁၇ ပတ်အတွင်း လက်ဗွေတွေ ပေါ်လာသလို ခြေချောင်းဗွေ တွေလဲ ထွက်ပေါ်လာလေ့ ရှိပါတယ်။ ခြေဗွေသည်လဲ လက်ဗွေလိုပဲ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မှာ လုံးဝမတူပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ခြေထောက်မှာကျတော့ ခြေအိတ်ဖြစ်စေ၊ ဖိနပ် တစ်မျိုးမျိုး ဖြစ်စေ အမြဲလိုလို ဝတ်ထားကြလေ့ ရှိတဲ့အတွက် လွယ်လွယ် နဲ့တော့ မရဘူးပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ဗွေနဲ့ဖွင့်ရတဲ့ ဖုန်းကို တခြား တစ်ယောက်က ကိုယ်အိပ်ပျော် နေတုန်း ကိုယ့်လက်ညိုးကို ကိုင်ပြီး ဖွင့်သုံးမှာကို စိုးရိမ်ရင် သူတို့မထင်တဲ့ ခြေဗွေနဲ့ ဖွင့်လို့ရအောင် လုပ်ထားနိုင် ပါသေးတယ်။
ဖော်ပြခဲ့တဲ့ လက်ဗွေ၊ ခြေဗွေ၊ မျက်လုံး၊ နားရွက်၊ လျှာ အစရှိတာ တွေဟာ လူသေဆုံးတာနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ယိုယွင်းပျက်စီး ပျောက်ကွယ် သွားမှာပါ။ ဒီတော့ သေဆုံးတာ ရက်တွေကြာပြီ ဖြစ်လို့ ပုပ်ပွနေတဲ့ အလောင်းကို ဆိုရင် ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့ မရနိုင် တော့ဘူးပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာ သွားတွေက အလွန် အရေးပါ လာပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ထောင်နဲ့ချီ ကြာတဲ့အထိ မပျက်မစီး တည်ရှိနေ နိုင်တဲ့ သွားတွေဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ DNA ကို ဖော်ပြနိုင်သလို လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မှာလဲ ဘယ်လိုမှ ချွတ်စွပ်မတူညီ နိုင်ပါဘူး။ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး သက်သေခံ အမှတ်အသား ထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
စက္ခုအာရုံကြော ။ မျက်လုံးရဲ့ အနောက်ပိုင်းမှာ လျှို့ဝှက်စွာ တည်ရှိတဲ့ စက္ခုအာရုံကြော ကိုလဲ အလွတ်မပေး ပါဘူး။ သက်သေခံ အမှတ်အသား အဖြစ် အသုံးပြု ပါတယ်။ မျက်စိရဲ့ အနောက်ဘက်က စက္ခုအာရုံကြော တွေဟာ သင့်ဗဟို အာရုံကြော စနစ်ကြီး တစ်ခုလုံးကို လှစ်ဟဖော်ပြ နေသလိုပါပဲ။ သင့်မှာ ဆီးချိုရှိလား၊ သွေးတိုးရှိလား၊ ဦးနှောက် ကျန်းမာရေး ယိုယွင်းနေပြီလား ဆိုတာတွေကို စမ်းသပ် စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ အပြင် ကျွဲ၊ နွား၊ မြင်း အစ ရှိတာတွေ မှာလဲဘယ်လို ရောဂါတွေ ဖြစ်ပွားနေပြီလဲ ဆိုတာ ဒီစက္ခုအာရုံကြော ကိုကြည့်ပြီး သိရှိနိုင်ပါတယ်။ တခြား သက်သေခံ အမှတ်အသား တွေလိုပဲပေါ့၊ စက္ခုအာရုံကြော ဆိုတာလဲ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် လုံးဝ မတူနိုင်ပါဘူး။
လမ်းလျှောက်ပုံ။ လမ်းလျှောက်ပုံ ကလဲ သက်သေခံ အမှတ်အသား ဖြစ်နိုင် ပါသေးတယ်။ သင်ဟာ ခြေတစ်ဖက်ကို နည်းနည်းလေး စွဲပြီး လမ်းလျှောက် နေတတ်သလို ခြေတစ်ဖက်ကိုပဲ ကြွကြွပြီး လျှောက်တတ်သူ တွေလဲ ရှိပါတယ်။ သင့် ခြေထောက် ဖိအား၊ ခြေလှမ်းအကျယ်၊ ခြေဦး၊ ခြေဖနောင့် ဘယ်ဟာကို အရင်ချတယ်၊ ခြေလှမ်း ခုနစ်လှမ်း လောက်မှာ ဘာ အပြောင်းအလဲ တွေဖြစ်တယ် ဆိုတာကို စက်ကိရိယာ တွေက အတိအကျ ဖော်ထုတ် နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ တူအောင် လုပ်လုပ် လူတစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် လမ်းလျှောက်ပုံချင်း တစ်ပုံစံတည်း ဘယ်တော့မှ မတူနိုင် ပါဘူး။ သင်ဟာ ဘယ်သူ ဆိုတာကို သက်သေခံ ပေးနိုင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အမှတ်အသား တွေအကြောင်း လေ့လာရေးသား တင်ပြလိုက်ရ ပါတယ်။
ယခုနှစ် သရက်သီးကို သဘာဝအတိုင်း ထုပ်ပိုးရောင်းချခြင်းထက် တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်ကုန်များအဖြစ် ပြုပြင်ရောင်းချခြင်းကို ပိုမို လုပ်ဆောင်သင့်
တန်ဖိုးမြှင့် သရက်ထုတ်ကုန် များမှာ ပြည်တွင်း ဈေးကွက် သာမက ပြည်ပဈေးကွက် တွင်ပါ အထိုက်အလျောက် နေရာရနေသည့် အတွက် ယခုနှစ်တွင် သရက်သီးကို သဘာဝအတိုင်း ထုပ်ပိုး ရောင်းချခြင်း ထက် သရက်ခြောက်၊ သရက်သီးသနပ်၊ သရက်ယို၊ သရက်ပျဉ်၊ အေးခဲသရက် စသည့် တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်ကုန်များ အဖြစ် ပြုပြင် ထုတ်လုပ် ရောင်းချခြင်းကို ပိုမိုလုပ်ဆောင် သင့်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး သရက်အစုအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်သန်းသန်းဆွေ က ပြောပြသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ သရက်ခြံများမှ တစ်နှစ်လျှင် သရက်သီး တန်ချိန် ငါးသိန်းကျော် ထွက်ရှိပြီး မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးမှ တန်ချိန် ၉ဝဝဝဝ ခန့် ထွက်ရှိကြောင်း၊ ပြည်တွင်း စားသုံးမှုမှာ တစ်နှစ်လျှင် တန်ချိန် ၄ဝဝဝဝ ခန့်သာ ရှိကြောင်း မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး သရက် အစုအဖွဲ့ ၏ စာရင်းများ အရ သိရသည်။ ယခုနှစ် အတွက် ဖေဖော်ဝါရီလ သရက်ပွင့်ချိန် ခန့်မှန်းချက် များအရ ယခုနှစ် သရက်သီး ရာသီတွင် သရက် အထွက်နှုန်း များနိုင် သော်လည်း အယ်လ်နီညို ရာသီဥတုကြောင့် အလျင်အမြန် ရင့်မှည့်ခြင်း၊ ပုပ်သိုး လွယ်ခြင်းများ ဖြစ်နိုင်သဖြင့် ပြည်ပသို့ တင်ပို့ သည့်အခါ ဈေးကွက် ပျက်နိုင်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး သရက်အစုအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်သန်းသန်း ဆွေ က ပြောပြသည်။
''လောလောဆယ် သရက်ပွင့်တဲ့ အနေအထားကို ကြည့်ပြီး ခန့်မှန်းရမယ် ဆိုရင် ဒီနှစ် သရက်သီးက အသီးများ လိမ့်မယ်။ ဒါ့ပြင် အယ်လ်နီညို ကြောင့် ရာသီဥတုကလဲ တအားပူလာမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အထားမခံဘဲ အမှည့်မြန် ပါမယ်။ ဒီကြားထဲ မူဆယ် ဈေးကွက်ကို တင်ပို့တဲ့အချိန် ကားလမ်းတွေ ပိတ်တာမျိုး ဖြစ်ရင် တစ်ရက်နဲ့ ရောက်ရမယ့် အသီးက သုံး၊ လေး ရက်ကြာပြီး လမ်းမှာ ပုပ်သိုးတာ တွေလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ပြည်တွင်း ဖြုန်းအား ကလဲ တစ်နိုင်ငံလုံး အထွက်နှုန်းရဲ့ ဆယ်ပုံတစ်ပုံ လောက်ပဲရှိလို့ ထွက်သမျှ အသီးကို ပြည်တွင်းမှာပဲ ကုန်အောင် ရောင်းဖို့ဆိုတာ လုံးဝ မဖြစ်နိုင် ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အကြံပေးချင် တာက ဒီနှစ်မှာတော့ သရက်သီး တွေကို ကြာရှည်ခံ အောင် စီမံ ပြုပြင်ပြီးမှ ဈေးကွက်တင် ရောင်းချတာကို မဖြစ်မနေ လုပ်ရမှာပါ'' ဟု ၄င်းက ဆက်လက် ပြောပြ၍ သိရသည်။
Posted by myawady at 1:43 PM No comments:
ပြည်ပသို့ စိန်တစ်လုံးသရက်သီး တင်ပို့မှု ယမန်နှစ်ကထက် တန်ချိန် ၂၀၀ တိုးမြှင့် တင်ပို့မည်
ပြည်ပသို့ စိန်တစ်လုံး သရက်သီး တင်ပို့မှုအဖြစ် ယမန်နှစ်က စင်ကာပူနိုင်ငံ သို့ တန်ချိန် ၃ဝဝ ခန့် တင်ပို့ခဲ့ပြီး ယခုနှစ်တွင် တန်ချိန် ၅ဝဝ တင်ပို့မည် ဖြစ်သောကြောင့် ယမန်နှစ်ကထက် တန်ချိန် ၂ဝဝ တိုးမြှင့် တင်ပို့မည် ဖြစ်ကြောင်း စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး သစ်သီးဝလံ အသင်းမှ သိရသည်။
ယခုနှစ်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး၌ စိန်တစ်လုံး သရက်သီး တန်ချိန် ၂၅ဝဝ မှ ၃ဝဝဝ ကြားထွက်ရှိပြီး ရွှေဟင်္သာနှင့် ရင်ကွဲ သရက်သီး များလည်း ထွက်ရှိရာ တရုတ်နိုင်ငံ သို့ မူဆယ် ၁ဝ၅ မိုင်မှတစ်ဆင့် တင်ပို့ရောင်းချ လျက်ရှိကြောင်း ဒီပဲယင်းမြို့နယ် မှသစ်သီးဝလံ အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းထွန်း က ပြောသည်။
''ပြည်ပတင်ပို့ဖို့ စာချုပ်တွေတော့ ချုပ်ထားတာ ရှိတယ်။ ပင်လယ် ရေကြောင်းက တင်ပို့မယ်ဆိုရင် ကုမ္ပဏီနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ပြီးမှ တစ်ဆင့်တင်ပို့ ရတယ်။ စိန်တစ်လုံး သရက်သီးကို စင်ကာပူကို တိုးပြီးတင်ပို့ဖို့ ရှိပါတယ်'' ဟု ၄င်းက ပြောသည်။ သွင်းအားစု ကုမ္ပဏီများမှ ဝယ်ယူကာ စိန်တစ်လုံးနှင့် ရွှေဟင်္သာ သရက်သီးတို့ကို စင်ကာပူ၊ ထိုင်း၊ မလေးရှားနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ တို့သို့ တင်ပို့လျက် ရှိကြောင်း အဆိုပါအသင်းမှ သိရသည်။
သရက်သီး အထွက်နှုန်းမှာ ရာသီဥတု အပေါ် မူတည်သောကြောင့် ယခုနှစ် မေလကုန်အထိ စောင့်ကြည့်ရမည် ဖြစ်ကာ ဂျပန်နိုင်ငံ မှလည်း စိန်တစ်လုံး သရက်သီးကို ဝယ်ယူရန် စိတ်ဝင်စားလျက် ရှိကြောင်း သရက်သီး တင်ပို့သော ကုမ္ပဏီများမှ သိရသည်။ (၄၄၃)
သောက်သုံးရေ ပြတ်လပ်သဖြင့် အကူအညီ ပေးရသည့်ကျေးရွာ ၃၃ ရွာရှိ
သောက်သုံးရေ ရှားပါးပြတ်လပ် သဖြင့် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနသို့ ရေအကူအညီ တောင်းခံ သောကြောင့် အကူအညီပေး ရမှုသည် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်အထိ တိုင်းဒေသကြီး လေးခု၊ ပြည်နယ် တစ်ခုနှင့် နေပြည်တော် ကောင်စီနယ်မြေ တို့ရှိ စုစုပေါင်းမြို့နယ် ၁၃ မြို့နယ်မှ ကျေးရွာ ၃၃ ရွာရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
ထိုကဲ့သို့ အကူအညီ ပေးရာတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး စစ်ကိုင်းမြို့နယ် ၌ ကျေးရွာတစ်ရွာ၊ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး သနပ်ပင် မြို့နယ်၌ ကျေးရွာတစ်ရွာ၊ မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး ချောက်နှင့် ပခုက္ကူမြို့နယ် တို့၌ ကျေးရွာ
ငါးရွာ၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး မြစ်သား၊ တံတားဦး၊ ရမည်းသင်း၊ တောင်သာ၊ ပျော်ဘွယ်၊ ပုသိမ်ကြီးနှင့် ညောင်ဦးမြို့နယ် တို့၌ ကျေးရွာ ၂၁ ရွာ၊ မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင် မြို့နယ်၌ ကျေးရွာတစ်ရွာ နှင့် နေပြည်တော်
ကောင်စီနယ်မြေ ဇေယျာသီရိ မြို့နယ်၌ ကျေးရွာလေးရွာ တို့ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ကျေးရွာ ၃၃ ရွာသို့ ရေဂါလန်ပေါင်း ၆၂ဝဝဝ ခန့် ပေးပို့ထားကြောင်း သိရသည်။
ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၏ လေ့လာချက် အရ မြို့နယ်ပေါင်း ၁၇၆ မြို့နယ်မှ ကျေးရွာပေါင်း ၁၇၆၁ ရွာခန့်၌ မတ်၊ ဧပြီနှင့် မေလတို့တွင် သောက်သုံးရေ ပြတ်လပ်နိုင်သည့် အခြေအနေ ရှိကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး၌ မြစ်သား၊ တံတားဦး၊ ရမည်းသင်း၊ တောင်သာ၊ ပျော်ဘွယ်၊ ညောင်ဦး၊ မိတ္ထီလာနှင့် ငါန်းဇွန်မြို့နယ်တို့မှ ကျေးရွာ၂၅ ရွာ၊ မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး၌ ချောက်၊ ဆင်ပေါင်ဝဲ နှင့် ပခုက္ကူမြို့နယ် တို့မှ ကျေးရွာတစ်ရွာ စီကို ရေအကူအညီ ပေးနေရကြောင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး၌ သောက်သုံးရေ အခက်အခဲ ကြုံတွေ့နိုင်သည့် ကျေးရွာ အများဆုံး ရှိနေပြီး ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ် နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် တို့၌လည်း ရေပြတ်လပ် နိုင်သည့် ကျေးရွာ အများအပြား ရှိကြောင်း သိရသည်။ (၄၄၇)
တိုင်းပြည်ကို တပ်မတော်၏ အကာအကွယ်အောက်တွင် မယိမ်းမယိုင် ရှိနေစေရေးနှင့် ပြည့်စုံလုံခြုံစွာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရေး အတွက် အလေးထား လုပ်ဆောင်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ပုသိမ်တပ်နယ်ရှိ အရာရှိ ၊ စစ်သည် ၊ မိသားစုများကို တွေ့ဆုံ အမှာစကား ပြောကြားစဉ်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ပုသိမ်တပ်နယ်ရှိ အရာရှိ ၊ စစ်သည် ၊ မိသားစုများ အတွက် သုတရသစာအုပ်စာစောင် များနှင့် စားသောက်ဖွယ်ရာများ ပေးအပ်စဉ်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ၏ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှ ပုသိမ်တပ်နယ် မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေးအသင်း အတွက် ချီးမြှင့်ငွေ များ ပေးအပ်စဉ်
မိမိတို့၏ အဓိကတာဝန် ဖြစ်သည့် နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး ကို အပြည့်အ၀ ထမ်းဆောင်နိုင်ရန် စွမ်းရည်ရှိသည့် တပ်များ ဖြစ်စေရေး ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ၊ နိုင်ငံ့အရေးကို သိရှိနားလည်ပြီး မိမိတပ်၏ လုပ်ငန်း တာဝန်များ ၊ တပ်မတော်၏ လုပ်ငန်းများကို မလစ်ဟင်းစေဘဲ မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် တိုင်းပြည်ကို တပ်မတော်၏ အကာအကွယ် အောက်တွင် မယိမ်းမယိုင် ရှိနေစေရေး နှင့် ပြည့်စုံလုံခြုံစွာ ကာကွယ် စောင့်ရှောက် နိုင်ရေးအတွက် အလေးထား လုပ်ဆောင် သွားကြ၇န် တိုက်တွန်းလိုကြောင်း ဖြင့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် က ပုသိမ်တပ်နယ် နှင့် ဟိုင်းကြီးကျွန်း ရှိ ပမ္မ၀တီ ရေတပ်စခန်း ဌာနချုပ် တို့မှ အရာရှိ ၊ စစ်သည် ၊ မိသားစုများကို သီးခြားစီတွေ့ဆုံ အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် ထည့်သွင်း ပြောကြားသည်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်သည် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အတူ ယမန်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် အနောက်တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် ဧရာဝတီ ခန်းမ၌ ပုသိမ်တပ်နယ်ရှိ အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများကို တွေ့ဆုံ၍ အမှာစကား ပြောကြားသည်။
တွေ့ဆုံပွဲ အပြီးတွင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က တပ်နယ်ရှိ အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအတွက် သုတရသ စာအုပ်စာစောင် များနှင့် စားသောက်ဖွယ်ရာ များကို လည်းကောင်း၊ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်၏ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှ က မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး အသင်းအတွက် ချီးမြှင့်ငွေ များကို လည်းကောင်း၊ ညှိနှိုင်း ကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ပူးတွဲတာဝန် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်အောင်မြင့် က စားသောက်ဖွယ်ရာ များကိုလည်းကောင်း၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း) မှ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ကျော်ဇော က အားကစားပစ္စည်း များကို လည်းကောင်း အသီးသီး ပေးအပ်ကြရာ တိုင်းမှူး နှင့်တာဝန်ရှိသူ များက လက်ခံရယူ ကြသည်။
၄င်းနောက် တွေ့ဆုံပွဲသို့ တက်ရောက် လာကြသော အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုဝင်များကို ရင်းရင်းနှီးနှီး လိုက်လံနှုတ်ဆက် ကြသည်။ ဆက်လက်ပြီး တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်သည် ဟိုင်းကြီးကျွန်း၊ ပမ္မဝတီ ရေတပ်စခန်း ဌာနချုပ်ရှိ ပမ္မဝတီခန်းမ တွင် ရေတပ်စခန်း ဌာနချုပ်မှ အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများကို တွေ့ဆုံ အမှာစကား ပြောကြားပြီး တွေ့ဆုံပွဲ အပြီးတွင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က တပ်မတော်စက်ရုံ များမှ ထုတ်လုပ်သော စားသောက်ကုန် များနှင့် အဝတ်အထည် များကို လည်းကောင်း၊ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်၏ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှ က မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး အသင်းအတွက် ချီးမြှင့်ငွေ များကို လည်းကောင်း၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ရေ) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်း က စားသောက်ဖွယ်ရာ များကို လည်းကောင်း၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦးက အားကစားပစ္စည်း များကို လည်းကောင်း အသီးသီး ပေးအပ်ကြပြီး တွေ့ဆုံပွဲသို့ တက်ရောက် လာကြသော အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုဝင်များကို ရင်းရင်းနှီးနှီး လိုက်လံ နှုတ်ဆက်ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲများတွင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် က တိုက်စွမ်းရည် ရှိရန် လေ့ကျင့်ရေး (Training) များ ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြောင်းလဲလာသည့် စစ်နည်းဗျူဟာ များ၊ ကြုံတွေ့ရသည့် အခြေအနေ အပေါ် မူတည်ပြီး ချင့်ချိန်သုံးသပ် တတ်ရန်နှင့် မည်သည့် အခြေအနေတွင် ဖြစ်စေ ရင်ဆိုင်နိုင်ရန် အတွက် လေ့ကျင့်ရေး များကို မြှင့်တင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ တပ်မတော်သားများ အနေဖြင့် မိမိ၏လုပ်ငန်း တာဝန်အား အမြဲတမ်း အကျွမ်းတဝင် ဖြစ်နေစေရန် စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့ကျင့်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့မှသာ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ယုံကြည်မှုကို ရရှိပြီး စွမ်းရည်မြင့်မား လာမည် ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် ပြောကြားသည်။
ဒီမိုကရေစီ ကျင့်သုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ဒီမိုကရေစီတွင် စည်းကမ်းနှင့် ဥပဒေကို အလေးထား ရကြောင်း၊ ပြည်သူက ရွေးချယ်လိုက်သည့် ကိုယ်စားလှယ် များက သတ်မှတ် ထားသည့် ဥပဒေ၊ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ နှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲပြီး သက်ဆိုင်ရာ အလိုက် ဦးဆောင်မှု ပေးရကြောင်း၊ လက်ရှိတွင်လည်း ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနှင့် အညီ ဒီမိုကရေစီကို ဖော်ဆောင်နေကြောင်း၊ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်များတွင် ပါဝင်နေခြင်း သည်လည်း ဥပဒေနှင့် အညီသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ တပ်မတော် အနေဖြင့် တိုင်းပြည် တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေး၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး နှင့် တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး တို့တွင် ဥပဒေနှင့် အညီ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ တပ်မတော် အနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ခြင်း ထက် ဒီမိုကရေစီ အား ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရန် အဓိက တာဝန်ရှိကြောင်း ဖြင့် ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ သမိုင်းမှတ်တမ်း များအရ တိုင်းပြည်၏ နိုင်ငံရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီးပွားရေးပိုင်း များတွင်လည်း နိုင်ငံခြားသားများ၊ သွေးနှောများ ပါဝင် လုပ်ဆောင်ခြင်း နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ၏ အားနည်းချက် များကြောင့် နိုင်ငံတော် ပြိုကွဲမည့် အခြေအနေများ တွင် တပ်မတော်က တိုင်းပြည်၏ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ် ခဲ့ရကြောင်း၊ ယင်း အခြေအနေ များကြောင့်လည်း တပ်မတော် အနေဖြင့် ဒို့တာဝန် အရေးသုံးပါးကို အထိအခိုက် မခံနိုင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
စည်းလုံး ညီညွတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောကြားရာတွင် နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရရှိပြီးနောက် ဆိုရှယ်လစ် စနစ်နှင့် ဒီမိုကရေစီ စနစ် အားပြိုင်မှုများ ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ထိုအချိန်က လွတ်လပ်ရေး ဆုံးရှုံးသည့် နိုင်ငံများ၊ စစ်ဘေးစစ်ဒဏ် ခံရသည့် နိုင်ငံ အများစုသည် ဆိုရှယ်လစ် အတွေးအခေါ် အယူအဆ များကို လက်ခံကြကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင့်သုံးသော နိုင်ငံရေးစနစ် အရ လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုနှင့် နာကြည်း ခံစားမှုများ ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ ထိခိုက်နစ်နာမှု၊ နာကြည်းမှု ခံစားချက် များကြောင့် တပ်မတော် နှင့် အစိုးရအပေါ် မကျေနပ်မှု၊ စိတ်အလိုမကျ မှုများ ဖြစ်ပေါ် စေခဲ့ကြောင်း၊ မိမိတို့ အနေဖြင့် တပ်တွင်း စည်းလုံးညီညွတ် မှုကို ကျစ်လျစ် ခိုင်မာအောင် တည်ဆောက်၍ ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်စေရန် မှန်ကန်သည့် စိတ်စေတနာဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုကြောင်း မှာကြားသည်။
တပ်ပိုင်နှင့် တစ်ပိုင်တစ်နိုင် စိုက်ပျိုးရေး နှင့်ပတ်သက်၍ လက်ရှိ ရရှိနေသည့် လစာ၊ စရိတ်၊ ရိက္ခာခံစားခွင့် များသည် သင့်တင့် လျောက်ပတ်သည့် နေထိုင်နိုင်မှု တစ်ခုရှိကြောင်း၊ ယခုထက် ပိုမိုပြီး သက်သာ ချောင်ချိမှု ရရှိနိုင်ရန် အတွက် တပ်ပိုင်နှင့် တစ်ပိုင်တစ်နိုင် စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ရန် တိုက်တွန်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းသို့ လုပ်ဆောင် ရာတွင်လည်း တပ်ရန်ပုံငွေ တိုးပွားရေး အတွက် မဟုတ်ဘဲ မိမိတို့ စားသောက်ရေး အတွက် လိုအပ်ချက်ကို အဓိကထား ၍ ဒေသနှင့် ကိုက်ညီသည့် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် နှင့် ထိရောက် အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်ရန် လိုကြောင်း၊ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ဒေသတွင်း ဈေးကွက်တွင် ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအား မျှခြေ ဖြစ်စေ၍ ကုန်ဈေးနှုန်း တည်ငြိမ်မှု ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း မှာကြားသည်။
မှန်ကန်သည့် ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ တပ်မတော်သည် ကြီးမား ခိုင်မာသည့် Institution ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ကျီးကို ဘုတ်ရိုသေ၊ ဘုတ်ကို ကျီးရိုသေ ဆိုသကဲ့သို့ အပြန်အလှန် တာဝန် လေးစားပြီး မိမိတာဝန်ကို မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြင့် ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ကြရန် လိုကြောင်း၊ တပ်မတော်၏ ကောင်းမွန်မှုသည် ခေါင်းဆောင်မှ စ၍ လက်အောက် ငယ်သား အားလုံး၏ လုပ်ဆောင်ချက် ကောင်းမွန်မှု အပေါ်တွင် မူတည်ကြောင်း၊ အပြုသဘော ဆောင်သော မှန်ကန်သည့် ခေါင်းဆောင်မှု အောက်တွင် လက်အောက်မှ အမိန့်နာခံမှု၊ စည်းကမ်း ကောင်းမွန်မှု များဖြင့် အလိုအလျောက် လိုက်ပါလုပ်ဆောင် ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ခေါင်းဆောင်များ အနေဖြင့် အုပ်ချုပ်မှု၊ တာဝန် ပေးအပ်မှုတို့တွင် ကျောသားရင်သား မခွဲခြားဘဲ ညီညွတ်မျှတစွာ အုပ်ချုပ်ကြ ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မှန်ကန်သည့် ခေါင်းဆောင်မှု အောက်တွင် ကြည်း၊ ရေ၊ လေ မခွဲခြားဘဲ တပ်မတော် တစ်ရပ်လုံး စုစည်း ညီညွတ်စွာဖြင့် လိုက်ပါ လုပ်ဆောင်ကြရန် တိုက်တွန်း လိုကြောင်းဖြင့် ပြောကြားခဲ့သည်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင် များသည် ဟိုင်းကြီးကျွန်းရှိ တပ်မတော် ဆေးရုံတွင် ဆေးရုံတက်ရောက် ကုသမှုခံယူ နေသော အရာရှိ ၊ စစ်သည်များကို သွားရောက် တွေ့ဆုံ၍ ဆေးကုသ နေမှုနှင့် ကျန်းမာရေး အခြေအနေ များကို တစ်ဦးချင်း လိုက်လံ မေးမြန်းကာ အားပေးစကား ပြောကြားပြီး လက်ဆောင် ပစ္စည်းများ ပေးအပ်ကြသည်။ ထို့အတူ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်၏ ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှ နှင့်အဖွဲ့ဝင် များသည် ဆေးရုံတက်ရောက် ကုသမှု ခံယူနေသော မိသားစုဝင် များကို ရင်းရင်းနှီးနှီး လိုက်လံနှုတ်ဆက် အားပေးစကား ပြောကြားပြီး လက်ဆောင် ပစ္စည်းများ ပေးအပ်ခဲ့ ကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဟိုင်းကြီးကျွန်း ၊ ပမ္မ၀တီရေတပ်စခန်း ဌာနချုပ်ရှိ အရာရှိ ၊ စစ်သည် ၊ မိသားစုများ အတွက် တပ်မတော်စက်ရုံများမှ ထုတ်လုပ်သော အ၀တ်အထည် များ ပေးအပ်စဉ်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အား ပမ္မ၀တီရေတပ်စခန်း ဌာနချုပ်မှူး က တပ်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းကြီး ၄ ရပ် ဆောင်ရွက် ထားရှိမှုအခြေအနေ များကို ရှင်းလင်းတင်ပြစဉ်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဟိုင်းကြီးကျွန်း ၊ ပမ္မ၀တီရေတပ်စခန်း ဌာနချုပ်ရှိ အရာရှိ ၊ စစ်သည် ၊ မိသားစုဝင် များကို ရင်းရင်းနှီးနှီး လိုက်လံ နှုတ်ဆက်စဉ်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဟိုင်းကြီးကျွန်း ရှိ တပ်မတော်ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေသူ များကို အားပေးစကား ပြောကြားစဉ်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ၏ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှ ဟိုင်းကြီးကျွန်းရှိ တပ်မတော်ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေသော မိသားစုဝင်များကို လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ ပေးအပ်စဉ်
ဆက်လက်၍ ရေတပ်စခန်း ဌာနချုပ်အတွင်း မော်တော်ယာဉ် များဖြင့် လှည့်လည် ကြည့်ရှု စစ်ဆေးကြသည်။ ယင်းနောက် ဧည့်ရိပ်သာ ခန်းမတွင် ပမ္မဝတီ ရေတပ်စခန်း ဌာနချုပ်မှူး က ရည်မှန်းချက် တာဝန်အပေါ် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နိုင်မှုနှင့် တပ် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းကြီး ၄ ရပ် ဆောင်ရွက် ထားရှိမှု အခြေအနေ များကို ရှင်းလင်း တင်ပြရာ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က ပင်လယ်ပြင် လုံခြုံရေး တာဝန်များကို အပြည့်အဝ ထမ်းဆောင်နိုင်ရေး၊ ကျွန်းနယ်မြေ ဖြစ်၍ စစ်သည် မိသားစုများ၏ သက်သာ ချောင်ချိရေးကို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက် ပေးရေး၊ သစ်ပင်များ၊ လမုတော များအား စနစ်တကျ အောင်မြင်အောင် စိုက်ပျိုးရေး တို့အား မှာကြား ခဲ့သည်။ (၁၀၀)
မြ၀တီနေ့စဉ် ၊ စာ(၁၊ ၁၆)
All must steadfastly strive in all seriousness to provide country with full and complete protection without fail
Senior General Min Aung Hlaing cordially converses with Tatmadawmen at Pathein station.
The Senior General delivers an address at Hainggyi Island station.
Daw Kyu Kyu Hla presents cash for maternal and child welfare association through an official.
Nay Pyi Taw February 29
Efforts must be made for the troops to have combat prowess and capability for fully serving the defence duty which is Tatmadaw’s main task. In all seriousness, all must steadfastly strive to provide the country with full and complete protection without fail by fittingly and unwavering shouldering the unit missions and duties of Tatmadaw while understanding the national cause, urged Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing at his separate meetings with officers, other ranks and families of Pathein and Hainggyi Island stations.
The Senior General together with his entourage held the meeting with officers, other ranks and families at South-West Command yesterday morning.
After the meeting the Senior General presented books on knowledge and art and foodstuffs for them, his wife Daw Kyu Kyu Hla cash for station maternal and child welfare association, Joint Chief of the General Staff (Army, Navy, Air) Commander-in-Chief (Air) General Khin Aung Myint foodstuffs and Maj-Gen Aung Kyaw Zaw of Office of the Commanderin- Chief (Army) sports equipment through the command commander and officials. The Senior General and party then cordially greeted officers, other ranks and families.
Afterwards, the Senior General met with officers, other ranks and families of Panmawady Naval Region Command Headquarters at the HQ. After the meeting the Senior General presented foodstuffs and cloths manufactured by Tatmadaw factories, Daw Kyu Kyu Hla cash for station maternal and child welfare association, Commander-in-Chief (Navy) Vice-Admiral Tin Aung San foodstuffs and Lt-Gen Mya Tun Oo of Office of the Commander-in-Chief (Army) sports equipment. The Senior General and party then cordially conversed with those present.
At the meetings the Senior General pointed out the need to conduct trainings for enhancement of combat prowess, stressing the importance of training promotion to think and act in accord with the changing strategies and real situation and to face and work under any circumstance. Soldiers must undergo constant training to be skilled in their missions. Only then will they have the higher ability through qualification and self-confidence.
With regard to democracy, he said discipline and law are to be paid heed inademocratic society. Representatives elected by the people are to manage in line with laws and provisions and give
leadership respectively. At present, democracy is being established in line with the constitution and the involvement of military representatives in concerned parliaments is legitimate. The Tatmadaw would cooperate in line with law in bringing about peace and stability in the country, national unity, and national development. The Tatmadaw is mainly responsible for protecting democracy rather than implementing it, he added.
The Tatmadaw historically had to save the country when it was on the verge of collapsing asaresult of weak points in the constitution and the involvement of foreigners and mixed blood in politics, administration and economy of the country, and for this reason, the Tatmadaw dares not risk any threat to Our Three Main National Causes.
Regarding the unity, he said the country sawacompetition between socialist system and democratic system after it regained independence. He said that most of the countries that had lost independence and gone through wars tended to accept socialist concepts at that time. People had personal sufferings and grudge asaresult of the adopted political system and there had been dislike for the Tatmadaw and government because of those sufferings and grudge, he said calling on service personnel to build solid unity within the establishment and act with good will to establish good military-civilian relationship.
As regards the battalion/unitwise and manageable scale farming activities of the Tatmadaw, he said salaries, allowances, rations and entitlements, which service personnel are enjoying allow them leadadecent living, but service personnel need to do farming onamanageable scale as well as collectively for the establishment for better living. In so doing, he said service personnel should focus for their consumption rather than generating income for their concerned battalions, and are therefore need to effectively cultivate and breed the things which are suitable in their concerned regions, which will balance the supply and demand in the local market and help stabilize the commodity price.
With regard to the correct leadership, the Senior General noted that as the Tatmadaw isalarge and strong institution, the Tatmadawmen need to discharge their duties efficiently with mutual respects among them like the law of reciprocity. The good activity of the Tatmadaw depends on correct functions of both leaders and subordinates. All subordinates will follow the correct leadership with obedience and disciplinary activities. Leaders are to make equal terms of management and assignment over the subordinates. He urged the whole Tatmadaw without dividing the services of Army, Navy and Air Force to unitedly follow the correct leadership.
The Senior General and party asked after the officer and other rank patients at the military hospital in Hainggyi Island and comforted them individually. He then presented gifts to the patients.
Likewise, Daw Kyu Kyu Hla, wife of the Senior General, and party also comforted family members who are receiving medical treatments at the hospital and presented gifts.
After that, the Senior General and party viewed round the naval command headquarters inamotorcade. At the parlour, the commander of Panmawady Naval Region Command reported to the Senior General on accomplishments of the project and progress in carrying out four construction tasks of the military unit.
The Senior General gave instructions on taking security measures of the seas at full capacity, effective undertaking of welfare tasks for family members of servicemen in the island area, and successful growing of trees and mangrove forests. (100)
မြ၀တီနေ့စဉ်သတင်းစာ (၂၉-၂-၂၀၁၆) တနင်္လာနေ့
မြ၀တီနေ့စဉ်သတင်းစာ (၂၈-၂-၂၀၁၆) တနင်္ဂနွေနေ့
မီးနှင့်ကစားရန် ကြိုးပမ်းနေသည့် တူရကီ
တူရကီ အစိုးရသည် ဆီးရီးယားနိုင်ငံ အတွင်းရှိ ကာ့ဒ်တပ်ဖွဲ့ များကို တိုက်ခိုက်နိုင်ရေး အတွက် ယင်းနိုင်ငံ အတွင်းသို့ ကျူးကျော် ဝင်ရောက်ရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိရာ ယင်း လုပ်ဆောင်ချက် သည် တူရကီနိုင်ငံ အတွက် အန္တရာယ် များလွန်းလှ သည်ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ စင်စစ်တွင် တူရကီ အစိုးရသည် ၄င်းတို့ နိုင်ငံအတွင်း အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများကို တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်နေသည့် ကာ့ဒ်ပြည်သူ့ ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့(YPG) ကို တိုက်ခိုက်ရန် ဆန္ဒပြင်းပြ နေခြင်းထက် တခြား ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုရှိ နေသည်။
ယင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ အလက်ပိုပြည်နယ် အတွင်း စစ်ရေးအရ အသာစီး ရလာပြီး နယ်မြေ အများအပြားကို ပြန်လည် ထိန်းချုပ်လျက် ရှိသည့် ရုရှားထောက်ပံ့ခံ ဆီးရီးယားတပ် များကို ဟန့်တားရန်ပင် ဖြစ်သည်။ YPG တပ်များသည် ယခုအခါ ဆီးရီးယားတပ် များနှင့် ပူးပေါင်း၍ ISIS အစ္စလာမ္မစ် စစ်သွေးကြွ များအား တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပြီး တစ်ချိန်တည်း မှာပင် စစ်သွေးကြွ များ၏ အခိုင်အမာ ခြေကုပ်စခန်း များကို ပြန်လည်သိမ်းယူ နေခြင်းမှာလည်း တူရကီ အစိုးရအား ပိုမိုစိတ်ပျက် စေသည်။
တူရကီ သမ္မတ ရီဆက်တေရစ် အာဒိုဂန် သည် တူရကီနိုင်ငံ အတွင်း၌ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှု အပြီးတွင် ကာ့ဒ်တိုက်ဖျက်ရေး အစီအစဉ်ကို အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန် ဆုံးဖြတ် ခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် YPG တပ်များကို အမေရိကန် အစိုးရက အကြမ်းဖက် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း မရှိဘဲ ISIS အစ္စလာမ္မစ် စစ်သွေးကြွ များ နှိမ်နင်းရေးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင် နေသည့် လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု အဖြစ်သာ ရှုမြင် နေခြင်းကြောင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ၏ ရပ်တည်ချက် သဘောထားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တူရကီ ဝန်ကြီးချုပ် အာမက် ဒါဗူတိုးဂလူး သည် လွန်ခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ် အကုန်က ပြုလုပ်ခဲ့သော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တစ်ခုတွင် မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပြီး အမေရိကန် အစိုးရအနေဖြင့် မဟာမိတ်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်သည့် တူရကီနိုင်ငံကို အကြွင်းမဲ့ ထောက်ခံရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
တူရကီ အစိုးရသည် လက်ရှိတွင် ဆီးရီးယားရှိ YPG တပ်များအပေါ် ဗုံးကြဲ တိုက်ခိုက်လျက် ရှိပြီး ဆီးရီးယားနိုင်ငံ အတွင်းသို့ အမြောက်များဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ ယင်း လုပ်ဆောင်ချက် ကို နိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်း က ကန့်ကွက်ခဲ့ ကြသည်။ သို့ရာတွင် တူရကီနိုင်ငံ အနေဖြင့် မိမိကိုယ် မိမိ ခုခံပိုင်ခွင့် ရှိကြောင်း၊ ယင်း အခွင့်အရေး ကို မည်သည့်နိုင်ငံ ကမျှ ကန့်ကွက်ခွင့် မရှိဟု သမ္မတ အာဒိုဂန် က ပြန်လည် တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
ထို့ပြင် တူရကီနိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေး အတွက် မည်သည့် စစ်ဆင်ရေးမျိုး ကိုမဆို ဆီးရီးယား နိုင်ငံအတွင်း လုပ်ဆောင်ရန် အခွင့်အရေး ရှိသည်ဟု ၄င်းက ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော် တူရကီအစိုးရ အနေဖြင့် ၄င်းတို့၏ တပ်များကို ဆီးရီးယားသို့ မစေလွှတ်မီ ကောင်းစွာ စဉ်းစားရန် လိုအပ်သည်။ လက်ရှိတွင် အာဆတ်၏ တပ်များကို ရုရှားနိုင်ငံမှ အထောက်အပံ့ ပေးထားပြီး အစိုးရတပ် များ၏ မြေပြင် ထိုးစစ်ဆင်မှု အောင်မြင်ရေး အတွက် ရုရှား တိုက်လေယာဉ် များက လေကြောင်းမှ ပစ်ကူပေးလျက် ရှိသည်။
ထို့ကြောင့် တူရကီတပ်များ ဆီးရီးယားသို့ ဝင်ရောက်လာမည် ဆိုပါက ရုရှားအစိုးရနှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင် ရမည်ဖြစ်သည်။ အလားတူ YPG တပ်ဖွဲ့ဝင် များသည် ဆီးရီးယား အစိုးရတပ်များနှင့် ပူးပေါင်း နေသောကြောင့် တူရကီတပ်များ အနေဖြင့် ရန်သူ အများအပြား နှင့် ရင်ဆိုင်ရဖွယ် ရှိသည်။ အကယ်၍ တူရကီအစိုးရ အနေဖြင့် ရုရှား တိုက်လေယာဉ် အား ပစ်ချမိခဲ့သည့် အမှားမျိုး ထပ်မံဖြစ်ပွား ခဲ့ပါက စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ အခြေအနေ တစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာမည် ဖြစ်သည့်အပြင် နဂို ကတည်းက တင်းမာနေသည့် ရုရှားနှင့် တူရကီ ဆက်ဆံရေး သည် အဆိုးရွားဆုံး အဆင့်သို့ ရောက်ရှိသွားမည် ဖြစ်သည်။ ယင်း အခြေအနေကို အမေရိကန် အစိုးရက ကောင်းစွာ ရိပ်စားမိပြီး အခြေအနေ ကို ထိန်းထိန်း သိမ်းသိမ်း လုပ်ဆောင်ရန် တူရကီ နိုင်ငံအား ဖျောင်းဖျ ထားသည်။ တစ်ဖက်တွင် နိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ပွားလျက် ရှိသည့် တိုက်ခိုက်မှု အားလုံးသည် ကာ့ဒ် ခွဲထွက်ရေး သမားများ၏ လက်ချက် ဖြစ်သည်ဟု တူရကီအစိုးရ က စွပ်စွဲထားသည်။
အန်ကာရာ မြို့တော်၌ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကားဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်မှုမှာ ၄င်းတို့၏ လက်ချက် ဖြစ်သည်ဟု တူရကီ အခြေစိုက် ကာ့ဒ် စစ်သွေးကြွ များက အတည်ပြု ထားသည်။ ယင်း တိုက်ခိုက်မှု အတွင်း အနည်းဆုံးလူ ၂၉ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။ ထို့ပြင် တူရကီနိုင်ငံ အတွင်း ယင်းကဲ့သို့သော တိုက်ခိုက်မှု များကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွား မည်ဟု ကာ့ဒ် စစ်သွေးကြွ များက ခြိမ်းခြောက်ထား ပြန်သည်။ ယင်းအချိန်မှ စ၍ တူရကီ အစိုးရ၏ ကာ့ဒ် ချေမှုန်းရေး စိတ်ဓာတ်မှာ ပိုမိုပြင်းပြ လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
တခြားတစ်ဖက်တွင် နေတိုး တပ်ဖွဲ့ဝင် တူရကီ အနေဖြင့် ၄င်းတို့၏ တပ်များကို ဆီးရီးယားနိုင်ငံသို့ စေလွှတ်မည် ဆိုပါက ဒေသအတွင်း၌ စစ်ရေး အရှိန်အဝါ ကြီးထွားလာသည့် ရုရှားနှင့် နေတိုးတပ်ဖွဲ့ တို့အကြား တင်းမာမှု မြင့်တက်လာမည် ဖြစ်သည်။ ရုရှားနှင့် နေတိုးတို့၏ ဆက်ဆံရေးကို ကြည့်မည် ဆိုပါကလည်း နေတိုးတပ်ဖွဲ့မှ အရှေ့ ဥရောပရှိ ၄င်းတို့၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ အတွင်း (ရုရှား နယ်စပ်နိုင်ငံများ) ၌ လက်နက်များ တိုးမြှင့် ချထားမှုကြောင့် နှစ်နိုင်ငံ အကြား တင်းမာလျက် ရှိသည်။
ထို့ကြောင့် တပ်များကို ဆီးရီးယားသို့ ပို့ဆောင်မည့် တူရကီအစိုးရ ၏ ကြိုးပမ်းမှုမှာ အန္တရာယ် များလှသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဆိုရပါမူ စွန့်စားလွန်း လှသည်။ ဆီးရီးယား နိုင်ငံအတွင်း အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘော
တူညီချက် ချမှတ်နိုင်ရန် အမေရိကန်နှင့် ရုရှားတို့မှ ကြိုးပမ်းလျက် ရှိသည့်အပြင် ပြည်တွင်းစစ်အား အဆုံးသတ် နိုင်ရေးအတွက် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုများ ကျင်းပနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်လျက် ရှိသည်။ ဆီးရီးယား နိုင်ငံ အတွင်းရှိ ISIS အစ္စလာမ္မစ် စစ်သွေးကြွ များအား တိုက်ခိုက်ရာတွင် နိုင်ငံတကာမှ ပါဝင်လျက် ရှိသော်လည်း ရုရှားနိုင်ငံသည် ဆီးရီးယား သမ္မတ ဘာရှာအယ်လ် အာဆတ် ၏ အဓိက မဟာမိတ်နိုင်ငံ အဖြစ် ရပ်တည်နေသည်။
အာဆတ်၏ တပ်များသည် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခအတွင်း အတိုက်အခံ တပ်များ အပါအဝင် စစ်သွေးကြွ အဖွဲ့ပေါင်း များစွာကို ငါးနှစ်ကြာ တိုက်ခိုက်လျက် ရှိရာ ယခုအခါ ရုရှားအစိုးရ၏ စစ်ရေး အကူအညီဖြင့် ISIS အစ္စလာမ္မစ် စစ်သွေးကြွ များကို မကြာမီအချိန် ကာလအတွင်း အလက်ပို ပြည်နယ်နှင့် စစ်သွေးကြွ မြို့တော်အဖြစ် တင်စားခံထား ရသည့် ရက်ကာမြို့ အတွင်းမှ တိုက်ထုတ် နိုင်တော့မည် ဖြစ်သည်။ ဆီးရီးယားတွင် အစိုးရတပ် များက စစ်ရေးအရ အသာစီး ရလာသည့် အချိန်တွင် ရုရှားနိုင်ငံ၏ ဂုဏ်သတင်း မှာလည်း ဒေသအတွင်း၌ ပျံ့နှံ့လျက် ရှိသည်။
ထို့ကြောင့် တူရကီနိုင်ငံ အနေဖြင့် တပ်ဖွဲ့အရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သွေးအေးအေး ထားပြီး လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်လျက် ရှိသည်။ ဆီးရီးယားနိုင်ငံ အတွင်းသို့ မြေပြင်တပ်များကို စေလွှတ်မည့် တူရကီအစိုးရ ၏ အစီအစဉ် အား မဟာမိတ် နိုင်ငံကြီးဖြစ်သည့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ကလည်း ကန့်ကွက်ထားသည်။ ထိုအခြေအနေ မျိုးတွင် တူရကီ အစိုးရအနေဖြင့် အမေရိကန် အစိုးရ၏ သတိပေးချက်ကို လျစ်လျူရှု၍ ၄င်းတို့၏ တပ်များကို ဆီးရီးယား နိုင်ငံ အတွင်းသို့ မဆင်မခြင် စေလွှတ်ခဲ့မည် ဆိုပါက တင်းမာနေသည့် နိုင်ငံများနှင့် အဖွဲ့အစည်း များအကြား ရေကုန်ရေခန်း တိုက်ခိုက်မည့် စစ်ပွဲကြီး တစ်ပွဲအဖြစ်သို့ ဦးတည် လာနိုင်ဖွယ် ရှိသည်။
နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်သည်များ ဧရာဝတီနှင့် ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်း တစ်လျှောက် ပြည်တွင်းတွင် အပျော်စီးသင်္ဘောများဖြင့် လည်ပတ်ခြင်း ခရီးစဉ် စိတ်ဝင်စားမှုများလာ
ဧရာဝတီနှင့် ချင်းတွင်း မြစ်ကြောင်း တစ်လျှောက် ပြည်တွင်းသွား အပျော်စီး သင်္ဘောများဖြင့် လည်ပတ်ခြင်း ခရီးစဉ်ကို နိုင်ငံခြား ခရီးသွား ဧည့်သည်များ ပိုမို စိတ်ဝင်စားမှု များလာကြောင်း ပြည်တွင်း ခရီးသွား ကုမ္ပဏီများမှ သိရသည်။
ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာနမှ ကြီးကြပ်၍ ကုမ္ပဏီများ၏ စီစဉ်ဆောင်ရွက် မှုဖြင့် ဗြိတိန်၊ ဂျာမနီ၊ ဂျော်ဂျီယာနှင့် သြစတြေးလျ နိုင်ငံသားများ အများဆုံး လာရောက် လည်ပတ် ကြသည့် မန္တလေး၊ မုံရွာ၊ ဖိုလ်ဝင်တောင်၊ မုံရွာ- ရွှေစာရေး- ကနီ- ကြည်တောင်ဦး- ကလေးဝ- ဂဇက်ရွာ- မစိန်ရွာ- မော်လိုက်- ပျားစွဲဆင်စခန်း ခရီးစဉ်များကို RV Kalay Pandaw ရေယာဉ်ဖြင့် လည်ပတ် ကြကြောင်း သိရသည်။
''ချင်းတွင်းမြစ်က သွားလာရ ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြစ်ရေတိုးတဲ့ ကာလမှာပဲ သွားဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ လမ်းခရီး တစ်လျှောက်လုံးက အပန်းဖြေလို့ ကောင်းအောင် စိတ်ဝင်စားစရာ တွေများလို့ ချင်းတွင်းမြစ် ကို ရွေးချယ်တာပါ။ ဧရာဝတီ မြစ်ကြောင်း တစ်လျှောက် ဆိုရင်လည်း ၁ဝ ရက်ခရီး လောက် ကြာတော့ နိုင်ငံခြားသား တွေက ပိုပြီး စိတ်ဝင်စား ကြတယ်'' ဟု North ခရီးသွား ကုမ္ပဏီမှ ကိုဖုန်းနေလင်း က ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်သော နိုင်ငံခြား ခရီးသွား ဧည့်သည်များသည် မန္တလေးမြို့ မှတစ်ဆင့် ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်း တစ်လျှောက် အလှအပများကို ခံစားပြီး စစ်ကိုင်း၊ မင်းကွန်း၊ ပုဂံနှင့် ဗန်းမော် စသည့် ဒေသတို့သို့ အပျော်စီး သင်္ဘော ခရီးစဉ်များဖြင့် သွားရောက် လည်ပတ်ခြင်းကို အထူး စိတ်ဝင်စား ကြသည်။ မြစ်ကြောင်း တစ်လျှောက် နေထိုင်ကြသော ဒေသခံများ၏ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ သဘာဝ ရှုခင်းများ၊ ရိုးရာဓလေ့ စရိုက်နှင့် နေထိုင်မှုပုံစံ တို့ကို စိတ်ဝင်တစား လေ့လာကြောင်း သိရသည်။
ယခုနှစ်တွင် အပျော်စီးသင်္ဘော စီးနင်း၍ လာရောက် လည်ပတ်သော နိုင်ငံခြားခရီးသွား ဧည့်သည်များမှာ ခန့်မှန်းထား သည်ထက် ပိုမိုဝင်ရောက် လာနိုင်ကြောင်း ခရီးသွား လုပ်ငန်းများက ခန့်မှန်းထားသည်။
ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်း တစ်လျှောက် အပျော်စီး သင်္ဘောခရီးစဉ်များ စီစဉ်ပြေးဆွဲ ပေးနေသော မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင် Irrawaddy Princess River Cruise သင်္ဘောကုမ္ပဏီ ၏ သုံးစင်းမြောက် သင်္ဘောသစ် ဖြစ်သော Princess Royal အပျော်စီး သင်္ဘောမှာ မန္တလေး-ပုဂံ နှစ်ညအိပ် သုံးရက်ခရီးစဉ် နှင့် ပုဂံ-မန္တလေး နှစ်ညအိပ် သုံးရက်ခရီးစဉ် များအား ပြေးဆွဲပေးလျက် ရှိသည်။ (သဲသဲ)
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား ကျန်းမာရေး အခမဲ့ကုသပေးရန် စီစဉ်
လာမည့် ဘဏ္ဍာနှစ်မှ စတင်၍ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း များအား အထူး အစီအစဉ် တစ်ရပ် အနေဖြင့် ကျန်းမာရေး အခမဲ့ ကုသပေးရန် စီစဉ်နေကြောင်း ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
''ဘယ်နေ့ ဘယ်ရက်မှာ အစီအစဉ် စတင်မယ်ဆိုတဲ့ အသေးစိတ် ညွှန်ကြားချက် တော့ မသိရသေး ပေမယ့် အစိုးရဝန်ထမ်း အားလုံးကို ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု အခမဲ့ကုသ ပေးဖို့စီစဉ် နေပါတယ်။ လောလောဆယ် မှာတော့ နိုင်ငံပိုင် ဆေးရုံတွေမှာ ဘယ်သူမဆို အခမဲ့ကုသပေး နေတယ်'' ဟု ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
အခမဲ့ ကုသရာတွင် ဓာတ်ခွဲ စမ်းသပ်မှု အားလုံး အခမဲ့ ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း၊ ဓာတ်မှန်ဖြင့် ရောဂါရှာဖွေမှု များ၊ ရေရှည် သုံးစွဲမည့် ဆေးဝါးများအား စဉ်ဆက်မပြတ် ထုတ်ပေးခြင်း အပါအဝင် တခြားသော ဆေးဝါးများ အခမဲ့ပေးခြင်း၊ ခွဲစိတ်ကုသမှု အားလုံး အခမဲ့ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးများ မီးဖွားပေးခြင်း၊ အထူးကုသမှု များအဖြစ် မှန်ပြောင်း ထည့်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ် ဆေးခြင်း၊ သွားနုတ်ခြင်းနှင့် သွားဖာခြင်းများ ဆောင်ရွက် ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်း ဆောင်ရွက်ချက် များကို ဗဟိုအဆင့် ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီး၊ တိုင်းဒေသကြီး နှင့်ပြည်နယ် အဆင့် ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီး ၃၇ ရုံ၊ ခရိုင်ပြည်သူ့ ဆေးရုံ ၂၉ ရုံ၊ မြို့နယ်အဆင့် ပြည်သူ့ဆေးရုံ ၃၅၂ ရုံနှင့် တိုက်နယ် ဆေးရုံ ၅၅၂ ရုံ၌ ဆောင်ရွက်ပေး သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အခမဲ့ ကုသပေးမည့် အစီအစဉ်တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ဆဲ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ (ကိုယ်တိုင်)၊ ပြည်ထောင်စု အဆင့် အဖွဲ့အစည်းဝင်များနှင့် လွှတ်တော် အသီးသီးမှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ကြောင်းသိရသည်။
Ywangan township:acold hill town to visit in Myanmar in summer season
Although it is not the time of the summer season at present, the temperature is increasing day by day. If the weather is becoming hot, everybody may have the idea to rest inacold hill town.
When we say about the hill town, most of the people usually see Pyin Oo Lwin and Kalaw towns in their mind's eye. For this time, I want to advise you to go toahill town which is located in the southern part of Shan state and recently becomesapopular tourist destination in Myanmar. The name of the town is Ywangan.
Ywangan township is situated on Mandalay-Taunggyi road and travellers can go toYwangan township by bus from Mandalay or Taunggyi. If you go to Ywangan township, you are welcomed by beautiful mountain ranges when you turn to Kyaukse Han Myint Moe. Also, we can see agricultural plantations along the road to Ywangan.
Road to Ywangan is built on mountain valleys and it is very fascinating to driveacar on the road to Ywangan. Also, you need skilled drivers for the safety of passengers when you go to Ywangan. In addition, some places on the road to Ywangan are very narrow and steep, and, asaresult, big automobile vehicles like commercial truck do not pass through this way. However, you may feel happy and pleasant on the way before you reach to Ywangan as there arealot of scenic views along the road.
When you are in Ywangan, you can ask for travel information at the administrator's office. There arealot of places to visit in Ywangan and nearby places, but most of the people don't know where they should go in Ywangan. If necessary, you can hireatravel guide and can go to any place where you want to. However, you will have to pay from Ks-5,000 to Ks-10,000 per day to hireaguide. There are one hotel and three guest houses in Ywangan. The design of the hotel is likeabungalow with triple rooms. You have to pay Ks-30,000 per room foraday in the hotel.
However, the price of the guest house is reasonable (Ks-5,000 per person).
Moreover, if you are in Ywangan, you should go to Myathabeik blue water lake which is about 20 miles from Ywangan. The water of the lake is blue and an alms bowl is placed under the lake to donate the next Buddha according to the legend.
Travellers are not allowed to swim in the lake and they can swim in the streams near the Myathabeik blue water lake. You will feel fresh after you haveabath in the crystal clear water of the streams.
Also, you can study mural paintings at Pyadarlin cave which is not far from Ywangan. In addition, you can visit magnificent waterfalls at nearby places of Ywangan. There are also ancient stone caves near Ywangan.
The bus fare from Mandalay to Ywangan is from Ks-3,000 to Ks-5,000. Ywangan isaselfadministered zone and most of the local residents are Danu. The most prominent features of Danu are their smile and hospitality when guests will face in the hilly region. If you need help in Ywangan and nearby places, you can ask for help from locals. They will giveahand to you withabenevolent smile.
All in all, I would like to advise you to go to Ywangan in your summer holidays so as to refresh your mind again.